Date My Pet » Nahoana Isika no Tokony Hampiaraka ny Girl Tamin'ny Dog
amin'ny Sebastian Harris
Amin'izao fotoana izao aho! Fifandraisana tamin'ny vehivavy mahavariana. Aminy hoe tsara tarehy, manan-tsaina sy amin'ny teny. Izy mandrakizay izay rehetra afaka mangataka. Ny hany zavatra annoys ahy indraindray dia ny alika kely izay manomboka foana mba saro-piaro, isaky ny nanoroka na hamihina azy.
Ny tiako hambara, Tiako ny alika ary ny alika koa izay mipetraka amin'ny ray aman-dreny ahy ny toerana fa mbola mahazo sosotra noho ny hoe tsy afaka nanoroka azy tsy Nanao vivery ny tinnitus avy ny alika mivovò azy. Nanomboka mihitsy aza aho hankahala fa zavatra kely, mandra-Tsapako mba ho ny fanalahidy ho an'ny fifandraisana sambatra.
Fantatro fa adala tanteraka fa toa vao mainka nieritreritra ny toetra sy ny toetra ny ankizivavy, vao mainka tsapako fa ny mety ho fiantraikany alika azy be mihoatra noho izay nieritreritra.
Sary an-tsaina mihitsy aza aho ny fomba ankizivavy aho ho raha tsy efa nitaiza amin'ny fomba izay namela azy hikarakara maha hafa. Tonga tany amin'ny famaranana fa na dia mbola annoys ahy ny alika, rehefa tsy mitsahatra mivovò, Tsy maintsy misaotra azy noho ny olombelona lavorary izy, nanampy azy ho tonga. Farany tonga saina aho fa lavo amin'ny fitiavana miaraka amin'ny ankizivavy ny alika izay no fanapahan-kevitra tsara indrindra azoko hatramin'izay nanao.
Nianatra izy ny haka ny andraikitra
Indraindray aho ny fahatsapana fa ny ankizy ankehitriny ny ray aman-dreny mitaiza, fa tsy ny ho natsangana araka ny ray aman-dreniny. Vokatry ny fa tsy mahazo ny fahafahana hampivelatra ny fahatsapana ny andraikitra, satria tsy misy olona mampianatra azy ireo ny dikan'ny hoe ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra na olona iray.
Raha hitanao fa ny tovovavy miaraka ianareo dia tena tsy misy dikany ny andraikitra, angamba izy tsy nanana ny alika. Ny vehivavy iray nihalehibe amin'ny alika tonga dia mianatra mba handray ny andraikitra maha hafa.
Izy dia manana ny hiara-mandeha aminy, izy no nanome sakafo azy, ary izy no hitondra azy ho any amin'ny veterinarian rehefa marary. Ny zavatra rehetra dia mitaky ny fahatsapana ny andraikitra. Rehefa miaraka ianareo ankizivavy iray izay manana izany fahatsapana andraikitra maha hafa, ianao koa dia afaka ho azo antoka fa tsara tarehy ny fahatsapana andraikitra lehibe aza raha ny olombelona.
Raha ve ianao mieritreritra ny manomboka ny fianakaviana amin'ny vehivavy, tsara tokony hiafara amin'ny fifandraisana ny ankizivavy iray, izay manana ny fahatsapana ny andraikitra.
Afaka matoky ianao fa Izy dia manana be fiahiana Toetra
Fantatrao ve ny isan'ny zavatra iray izay mahatonga ny olona sambatra amin'ny fifandraisana? Aza, ny isan'ny zavatra iray no irinao ho azo avy tamin 'ny fifandraisana dia tsy misy ifandraisany amin'ny firaisana ara-nofo. Izay tiantsika dia vehivavy iray izay mikarakara antsika. Ny lehilahy ny vehivavy te izay manana toetra be fiahiana.
Izany dia tsy misy ifandraisany amin 'ny misbelief fa te ho heverina ho toy ny mpanjaka tao amin'ny fifandraisana. Rehetra tiantsika dia ny mahatsapa fa ny ankizivavy miaraka isika amin'ny tena miahy antsika. Raha toa ka misy karazana ankizivavy iray izay vonona kokoa ny hikarakara ny aminareo noho ny zazavavy hafa, kosa izy, dia ny zazavavy izay manana ny alika.
Mikarakara ny alika dia mitaky be dia be ny fotoana sy ny faharetana. Mbola tsy nihaona tamin'ny vehivavy nanana alika, ary izay tsy nanana toetra be fiahiana. Ataovy azo antoka fa ny ankizivavy ianao hiafara amin'ny fifandraisana te hikarakara ny olombelona hafa, anisan'izany ianao.
Izy Tsy Couch Ovy
Izaho tena liana amin'ny fanatanjahan-tena. Tiako ny mandeha sy mihazakazaka ho amin'ny rivotra madio. Noho ny zava-misy aho fa tsy liana amin'ny fandaniana andro rehetra teo anoloan'ny fahitalavitra kosa ny vitaminina D fari mahazo ambany sy ambany, Izaho ihany koa dia tsy liana amin'ny fandriana niaraka ovy.
Raha ny ankizivavy miaraka ianareo manana ny alika, dia afaka ho fantatro tsara fa na inona na inona izy fa kamo farafara ovy. Raha tsy te-hanana alika poop manerana ny tany, tokony hiara-mandeha ny alika roa, fara fahakeliny in-andro.
Manome antoka anareo aho fa ny ankizivavy iray izay manana alika fa mandany ny fotoana manao zavatra ivelan'ny, fa tsy mandanilany ny fotoana teo amin'ny seza lava. Eny, na dia no sosotra noho ny ankizivavy ny alika rehefa tsy mitsahatra mivovò, Tiako izany rehefa maka miaraka aminy.